Home News Somaliland oo soodhaweysay cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya mudada lagu kordhiyay
Somaliland oo soodhaweysay cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya mudada lagu kordhiyay
Maamulka Somaliland ayaa si cajiib ah kaga hadlay cunaqabateynta hubka ee muddada sanadka ah lagu kordhiyay dowladda Soomaaliya, kadib qoraal kasoo baxay golaha amaanka ee Qaramada Midoobay.
War qoraal ah oo kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland ayaa lagu sheegay inay taageersan yihiin cunaqabateynta hubka ee mudada sanadka ah loo kordhiyay, sida qoraalka lagu sheegay.
Waxay qoraalka ku taageereen warbixintii laga gudbiyay dowladda Soomaliya, waxaana ay sheegeen in Soomaaliya awood iyo xirfad aysan laheyn inay xakameyso hubka gacanta u gala.
Sidoo kale Somaliland ayaa sheegtay in hubka loo gacan geliyo dowladda Soomaaliya uu qatar weyn ku tahay Somaliland iyo dalalka deriska la ah Soomaaliya, sida qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda lagu sheegay.
Somaliland ayaa walaac ka muujisay dowladaha hubka Siiya dowladda Soomaaliya, waxaana ay sheegeen inay qatar tahay in kooxaha argagixisada ay gacanta ku dhigaan, taasina halis kale ay ka imaan karto.
Ugu dambeyn waxay sheegeen in cunaqabateynta hubka uu u wanaagsan yahay amaanka gobolka loona baahan yahay in lasii kordhiyo ilaa dowlad awood badan ay ka imaaneyso.
Waxay IGAD iyo caalamka ka dalbadeen inay ka shaqeeyaan dib usoo celinta wadahadalada Soomaaliya iyo Somaliland, taasi oo ay sheegeen in amaanka gobolka wax weyn uu ka tari doono.
Previous articleFadeexada Kheyre ee doorashada Madaxtinimo ee Koonfur Galbeed oo si cad loo ogaaday
Next articleMagaalada Adis ababa oo maanta lagu soo geba-gabeynayo shirka urur Goboleedka Igad
Xaliimo yareey oo Garoowe u tagtay Qabashada Doorashada Kursigii Ex-Xil.Dhahar Laga...
Gud. Yariisow Ma soo Celin Doonaa Dhulalkii Sharcidarrada ahaa ee la...